Farriintii Uu Diego Costa U Diray Arsenal Markii Uu Dhaawacay Laurent Koscielny Iyo Qaabkii Axmaqnimada Ahaa Ee Uu Isku Difaacay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(16-12-2018) Difaaca Arsenal ee Laurent Koscielny ayaa shaaciyey inuu u bilaabmay wax uu ugu yeedhay ‘Cutubka Cusub Ee Noloshiisa’ kaddib markii uu kasoo laabtay dhaawac uu u jiifay tan iyo bishii May ee horraantii sannadkan, xilligaas oo uu dhaawac halis ah ka gaadhay lugta intii uu socday kulankii semi-finalka Europa League ee ay iskaga hor yimaaddeen Atletico Madrid.
Soo laabashadiisu, waxay noqotay mid la sugayay muddo toddoba bilood ah, waxayse nefis siisay tababare Unai Emery oo dersin difaacyahannadiisa ay dhaawacyo soo gaadheen sida Holding iyo Mustafi, waxaana uu tiir adag u noqday kulankii Qarabag oo noqday mid guul kaga farxiyey Koscielny.
“Wuxuu ahaa dhaawacii weynaa ee iigu horreeyey waahayga, waxaanay noqotay inaan waqti dheer qaato, laakiin wax badan ayaad naftaada ka baranaysaa, aadna waan u faraxsanahay. Waxay ahayd maalintii ugu dambaysay ee dibu-kabashadayda, sidaas darteed cutub cusub oo noloshayda ah ayaan bilaabay” Ayuu yidhi ciyaartii Qarabag kaddib.
Haddaba, dhaawacaas soo gaadhay bishii May ee dibedda ka dhigay garoomada muddada toddobada bilood ah, waxa uu Arsenal ka hor istaagay fursad ay ku guuleysato Europa League oo haddii ay gacanta ku dhigi lahayd ay ka qayb-geli lahayd Champions League, laakiin dhibaatadu waxay noqotay markii daqiiqaddii 12aad loo yeedhay dhakhaatiirta ciyaartii Wanda Metropolitano oo ahayd lugtii koowaad, waxaana lagu qaaday sariirta dhaawacyada oo xattaa uu lugtiisa ku istaagi kari waayey.
Booskiisa waxa lagu soo beddelay Calum Chambers, laakiin waxa dhibaato ku noqday khadka dambe ee Arsenal inay maare u helaan Diego Costa oo marka horena dhaawac iskaga diray Koscielny oo hayey intii dambena jug kala daalay Chambers iyo Mustafi.
Sida ka muuqata muuqaal laga diyaariyey dhaawacii Koscielny, Diego Costa ayaa soo dul istaagay difaaca reer France oo dhaawac ah oo ay dul taagan yihiin Dr. Gary O’Driscoll iyo qaar ka mid ah ciyaaryahannada kale ee kooxdiisu, waxaana dhamaantood layaab ku noqotay sida fudud ee uu doodda uga dul abuuray Koscielny oo dhaawac ah.
“Laurent wuxuu dareemayey xanuun badan, waxaanu igu yidhi: ‘Wuu i laagay! wuu ilaagay!” Sidaas waxa yidhi Dr. Gary O’Driscoll.
“Kaddib waxa noo yimid Diego Costa, waxaanu i taabtay garabka isagoo leh: “Maan laagin, waxa aan maqlay sanqadha (jabniinka).”
Xaqiiqadu waxay ahayd in Koscielny uu dareemayay xanuun badan, una malaynayey in Costa uu laaday, waxaana iyaguna goobta yimid ciyaartooyo uu ka mid yahay Griezmann oo ay qaranka Faransiiska u wada ciyaaraan Koscielny, waxaana uu muujiyey jewi murugo leh.